Geeddi oo Galay Khiyaanno Qaran oo Kale
London, UK | Nov 26, 2005
...Heshiiskii Xasan Abshir iyo Geeddi la galeen shirkad lagu sheegay inay difaaceyso xeebaha Soomaaliyeed ayaa mar kale furay shaki ah in madaxda dowladda qaarkood sameynayaan waxay rabaan. Shirkaddaas waxaa lagu sheegay �Topcat marine security�. Xasan Abshir wuxuu sheegay in shirkaddaasi ugu timid madaxweyne C/hi New York markuu ka qeybgalayey shirkii hogaamiyayaasha adduunka. Xasan Abshir wuxuu sheegay inuu ogaa shirkaddaas ayna marar badan la soo xiriireen intaan Geeddi iyo isagu saxiixin. Dhegeyso halkan...
Qorshihii Barre-hiiraale oo Maxamed-dheere kala Qaaray; Xilkii Qanyare oo Xasan Abshir Qaatay iyo Geeddi oo Galay Khiyaanno Qaran oo Kale
Ninkii wax garqaadilahaa haddii isaga la garqaado, yaa raggaas kala qaban? Barre-hiiraale wuxuu yiri hala igu sharfo inaan madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka heshiisiiyo, sida la sheegeyna ma jirin qolo diidday. Dhabcan Geeddi wuxuu ku dabofeyshanyahay madaxweynaha maaddaama la rabay inuu yahay nin gooni u taagan. Waxaa dad badan yaxyax ku riday qodobbadii Jowhar looga dhawaaqay ee ahaa in 36 xubnood oo labada dhinac ka kala socdaa ay ku shiraan Kismaayo si ay waddada ugu sii xaaraan kulanka ka dhacaya Jowhar. Gogosha Barre-hiiraale iyo Kismaayo waxay la mid noqotay xulka Juunyeerka Soomaaliyeed halka xulka qaranka Soomaaliyeed la rabo inuu ku ciyaaro Jowhar! Ma garanayo waxa beddelay qorshihii korneylka. Ma Kismaayuu ka baqay kaddib markii Muuse Suudi iyo Qanyare dhaheen waxaan la tageynaa tikniko badan? Ma Maxamed-dheeraa diiday? Ma Itoobiyaa ku gacanseyrtay?
Horuu Juriille u qaatay jagadii ra�iisulwasaaraha. La yaab ma leh in Juriille u raaco Geeddi dibadaha maaddaama uu sito jago ah iskaashiga iyo xiriirka caalamiga laakiin guddoomiyaha Koonfurta Mudug ayaa dadka ku baraarujiyey in xitaa Juriille usoo dhigtay inuu ka hadlo waaxihii loo qeybiyey gobollada Soomaaliyeed. Guddoomiyuhu wuxuu yiri sidee Juriille arrintaas uga hadlikaraa wasiirkii arrimaha gudaha oo soo taagan? Hadda heshiiskii Xasan Abshir iyo Geeddi la galeen shirkad lagu sheegay inay difaaceyso xeebaha Soomaaliyeed ayaa mar kale furay shaki ah in madaxda dowladda qaarkood sameynayaan waxay rabaan. Shirkaddaas waxaa lagu sheegay �Topcat marine security�. Xasan Abshir wuxuu sheegay in shirkaddaasi ugu timid madaxweyne C/hi New York markuu ka qeybgalayey shirkii hogaamiyayaasha adduunka. Xasan Abshir wuxuu sheegay inuu ogaa shirkaddaas ayna marar badan la soo xiriireen intaan Geeddi iyo isagu saxiixin.
Xasan Abshir wuxuu si fiican u sharxay dhibka lagu hayo badaha Soomaaliyeed. Ha ahaadeen kuwa ay wadaan maraakiibta shisheeye ee ka kalluumeysta; sunta lagu duugo iyo burcad-badeedka Soomaaliyeed. Wuxuu carrabka ku dhuftay baahida loo qabo in arrintaas wax laga qabto. Hadalka Xasan sax buu ahaa laakiin waddaday mareen baa khaldaneyd. Laakiin waxaa dadka siyaasadda Soomaaliya u kuurgala ka yaabiyey sida Maxamed Qanyare uu saxiixaas ugu sheegay burcadnimo iyo boob. Qanyare wuxuu si cilmiyeysan u kala dhig dhigay inuusan Xasan Abshir shuqul ku lahayn wax ku saabsan amniga waddanka. Keliya uu golaha wasiirrada soo hordhigokaro si looga hadlo dhibta lagu hayo kheyraadka waddanka. Arrintu waa sida Qanyare u sheegay. Waxaan rabaa inaan sii xoojiyo arrinta Qanyare si dadka Soomaaliyeed u fahmaan waxa ra�iisulwasaare ama wasiir samaynkaro iyo wuxuusan samaynkarin. Bishaan Nufeembar waxaa ra�iisulwasaaraha Britain soo bandhigay qorshe ahaa in dadka �argagixisadaa� (muslimiinta) la heynkaro muddo 90 cisho ah inta baaritaan lagu hayo iyagoon maxkamad la soo taagin. Waxaa ra�iisulwasaaraha fikraddaas la qabay taliyaha booliiska Britain laakiin arrintaas waxaa gaashaanka ku dhuftay xildhibaannada baarlamaanka Britain. Xildhibaannada arrintaas diiday waxaa ku jiray in ka badan 30 ka tirsan xisbiga talada haya. Sidee ku dhicikartaa in Geeddi iska saxiixo heshiis horay loo soo maleegay isagoon soo marin labada gole midna? Mise Soomaalidaa dimuqraadiyadda uga horraysa caalamka kale? Qanyare haba laga hor istaago in loo sheego wuxuu wasiirka ku ahaaye meeyey Xuseen Ceydiidkii iyaga la jaalka ahaa? Ileyn isna waa wasiirka arrimaha gudahee mase laga wergeliyey arrintaas? Saxiixase goobjoog ma ka ahaa?
Horta waxaannu ku leennahay Barre-hiiraale waad ku mahadsantahay isku deygaas aad ku rabtay inaad isagu keento xubnaha uga sarsarreeya waxa lagu soo dhisay Kenya. Teeda kale waxaan kaa codsan lahayn inaad ka ogolaatid
ummadda Soomaaliyeed inay arkaan xildhibaannada oo ku shiraya Kismaayo si looga hadlo khiyaamooyinka qaran ee Geeddi ka galayo waddanka Soomaaliyeed. Xildhibaan kasta oo xalaal ah waxaan u caddaaneysa waxa Geeddi muteysandoono, khaladaadkiisan owgeed:
Geeddi oo loo doortay inuu Xamar wax ka qabto sidoo kalana la xaalo hogaamiyayaasha qoladiisa ah laakiin arrintaas ku guuldarraystay.
Geeddi oo daciifnimadiisu soo baxday markuu sheegay inuu Xamar degayo kaddibna ka laabtay markii Maxamed-dheere saxaafadda ka yiri: Geeddi baa dadkii jahwareerinaya � Xamar baa la degayaa; Jowhar baa la degayaa; Xamar baa la degayaa; Jowhar baa la degayaa. Maxamed-dheere wuxuu intaas ku daray in dowladdu raadsato magaalo kale maaddaama aanu Jowhar wada qaadikarin.
Geeddi oo markuu xilkiisii ka soo bixiwaayey gudogalay inuu magacaabo guddoomiyayaal gobollo sida Banaadir iyo Hiiraan.
Geeddi wuxuu geesmaray hadafkii shirkii Kenya isagoo mar kasta caaya kuwa Xamar jooga halkii laga rabay inuu walaaloow wax ku wado.
Isagoo bilaabay shaqsi weerar markuu sheegtay inuu xiray garoomadii diyaaradaha ee Deyniile iyo Ceel Axmed. Halkaas oo uu sii kordhiyey qabiilada ku kacsan dowladdiisa.
Isagoo mowqif iska soo horjeeda ka istaagay arrintii shidaal-baarkii Puntland. Mar Puntland buu yiri wata howshkiina marna wuu ka horyimid. Kaddib markii wafti Puntland ka socda Jowhar ugu yimaadeen ayuu yiri howshiinna wata haddana Brussels buu ka yiri cid aan dowladda dhexe ahayn kama hadli karto shidaalka iyo kheyraadka waddanka.
Wuxuu sheegay in dib-u-heshiisiintii dhammaatay halka wasiirradiisii iyo xubnihii baarlamaanka ee ay isku fikirka ahaayeen ay leeyihiin waxaan magacaawney guddiyo ku kala shiraya Kismaayo iyo Jowhar. Marka haddii dib-u-heshiisiintii dhammaatay maxaa laga heshiinayaa?
Wasiirradiisii iyo isaga ayaa waxay gobolladii Soomaaliyeed u qeybiyeen 6 waaxood oo Somaliland ku jirto iyagoon xildhibaanno iyo ergooyinkii Kenya joogay midna la tashan.
Isla Geeddi ayaa sheegay inuusan waxba ka qabin haddii Somaliland la aqoonsado sidoo kalana uu yiri ma jirto dhib heysta iyo wax ka maqan Soomaali Galbeed iyo NFD iyadoo maalinka uu hadalkaas leeyahay lagu xasuuqay Qabri-daharro dad badan oo Soomaaliyeed sidoo kalana la gubay tuulo u dhow.
Wuxuu u rukuucay cadaadiska Zenawi isagoo leh: dowladdii Carta waxaa riday Zenawi marka suusan tan u ridin waa inaan yeelnaa wuxuu noo jeediyo. Arrintasi waxay dhinac marsantahay dhaqanka muslimiinta iyo kan gaalada. Ilaahay wuxuu na baray ineynaan isu dhiibin cadowga ugu weyn � sheydaan iska daa mid ka yare. Wuxuu Islaamku sheegay inaan cadowga cadow ka yeelano. Sidoo kale qofkii la socda taariikhda binu-Aadamka, lama arag cid leh cadow la isu dhiibo. Fiiri dagaalkii labaad siduu yeelay ra�iisul wasaarihii Britain, Churchill. Britain xag ciidan, cududda iyo tiknoolajiyaddaba aad bay uga hooseysay Jarmalka. Laakiin markii Hitler uu cagta mariyey Poland oo uu qabsaday Paris baa Britain dagaal iclaamisay iyadoon Britain weli la soo weerarin. Churchill sida Geeddi ma oran cadowga hala raalligeliyo laakiin wuxuu isku dayey inuu mintido intii la qabsanlahaa oo uu isdhiibilahaa.
Geeddi waa ninka leh Zenawina ha loo rukuuco halka uu Maraykan, Britain iyo Carabahana ku jeesjeesayo. Wuxuu yiri Britain iyadu waxay iska dabo-ordeysaa Maraykanka. Wuxuu kaloo yiri: meeye Carabihii la lahaa isku diin baad tihiin?
Geeddi waa ninka ku koobay kooxdiisa oo keliya aqoon-isweydaarsigii loogu talogalay sidii wax loogu qaban lahaa gobollada Soomaaliyeed.
Meyd waxaa u dambeeyey kaas la sii wado. Akhristayaal wakaas Geeddi shirkado u saxiixaya baddii Soomaaliyeed isagoon ogeysiin labada gole ee waddanka midna.
Xildhibaanno iyo akhristayaal soow si isku mid ah wax uma aragno? Ninkaasi wuxuu isku sii dirayaa qabiillada Soomaaliyeed marka haddaan intey goori goor tahay wax laga qaban waxaa la arki doonaa in wax la isweydiiyo markey xeero iyo fandhaal kala dhacaan. Waxaan filayaa in la helikaro xildhibaanno xilka ka xayuubinkara Geeddi haddii la helo meel lagu shiro sida Kismaayo oo kale iyo dhaqaale shirkaas lagu maalgasho. Khiyaamooyinkaas darteed waxaa la gudboon dadka dibadaha jooga iyo ganacsatada Soomaaliyeed iney diyaariyaan hantidii shirkaas lagu qabanlahaa si aan uga badbaadno sharta Zenawi noo maleegayo. Xildhibaannada qaar baa ka hadlay khiyaamada Geeddi oo Xamar jooga. Qaar waxaa damqaya waxa Geeddi ka yiri walaalahooda ku hoosjira gumeysiga. Kuwa Waqooyi iyo Puntland ka soo jeeda waxaa dhibaya hadalka Geeddi ee aan loo meeldayin. Kuwa intaas ka soo hara waa Ilmo Zenawi oo fara-ku-tiris ah danna kama lihin.
Marka waxaa korneylka u fiicneyd inuu si fiican u diido gosha Barre-hiiraale isagoon boor isku qarinin. Marka waa waqtigii kooxda Xamar iyo Barre-hiiraale ka tashanlahaayeen C/hi iyo Maxamed-dheeraha uu martida u yahay.
Faafin: SomaliTalk.com | Nov 26, 2005